Will Arnett's New Netflix Whodunit Seires 'Murderville' dia saika namboarina tanteraka teo an-toerana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Will Arnett's New Netflix Whodunit Seires 'Murderville' dia saika namboarina tanteraka teo an-toerana
Mangatsiaka ity feo ity
by Trey Hilburn III Janoary 14, 2022 1,415 hevitra
Ho lasa mamorona tokoa ve i Arnett sy Netflix miaraka amin'ny sub-genre whodunit. Ny hevitra iray manontolo ho an'ny andiany dia naorina manodidina an'i Arnett izay milalao mpitsikilo antsoina hoe Terry Seattle. Murderville miasa toy ny andian-dahatsoratra polisy. Ny tena mahaliana dia ny mpitsongo Arnett dia tsy maintsy manangona vaovao avy amin'ireo vahiny malaza izay tsy manana script. Tsy maintsy manamboatra tanteraka ny anjara andraikiny izy ireo. Tsy fantatr’izy ireo hoe iza ilay vono olona na izy ireo aza no mpamono olona.
Ny famoahana ofisialy ny Murderville mandeha toy izao:
Hihaona amin'ny Detective Senior Terry Seattle (Will Arnett), Diviziona Famonoan'olona. Ho an'i Terry, ny isan'andro dia midika tranga famonoana vaovao ary kintana vahiny malaza vaovao ho mpiara-miasa aminy. Fa izao no azony: tsy omena ny script ny kintan'ny vahiny isaky ny fizarana. Tsy fantatr'izy ireo izay hitranga amin'izy ireo. Ny kintan'ny vahiny sy ny Terry Seattle miaraka dia tsy maintsy mamolavola ny lalan'izy ireo amin'ny raharaha… fa anjaran'ny vahiny olo-malaza tsirairay ihany no manonona ilay mpamono.
Ny kintan'ny vahiny andiany Annie Murphy, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone ary ny hafa.
Afaka misambotra ianao Murderville's whodunit misy fizarana enina rehefa tonga ao amin'ny Netflix manomboka ny 3 febroary.